एकाङ्की : भगवान् को ! - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← अनूदित कथा : मेरो दाइ
एकाङ्की : सपनाका सपनाहरू →
(भित्तामा माक्र्स, लेनिन, माओका तस्बिरहरू टाँसिएका छन् । तल सामान्य सोफा छ । त्यसको तल दरी ओछ्याइएको छ । करिब ५० वर्षका चिन्तनराज हस्याङ्फस्याङ् गर्दै आवेग र आकाोशित मुद्रामा आइपुग्छन् । त्यहाँ उभिएर एकछिन यताउति हेर्छन् र सोफामा हात खुट्टा फालेर बस्छन् ।)
चिन्तनराज – (एकछिन गुनगुनाउँदै) ओेहो कत्रो अनर्थ ! सरकारमा गएपछि जनताभन्दा अरू नै शक्तिमा यिनको भरोसा बढ्दो रहेछ । पद, शक्ति र प्रभावमा रहिरहन अदृश्य र अलौकिक शक्तिलाई मुख्य ठान्ने ? कतिसम्म पाखण्ड ! यिनीहरूका प्रगतिशील एजेन्डा कति कमजोर ! उफ् ! (टेबुलमा रहेको एक गिलास पानी स्वाट्टै पार्छन् ।) अँ, आन्दोलन, सङ्घर्ष, क्रान्तिका क्रममा धर्म, भगवान्, ईश्वर वा अलौकिक शक्तिको अस्तित्वलाई ठाडै अस्वीकार गर्ने कुरा हराउँदा रहेछन् । कम्युनिस्टहरूमा त्यसप्रति अगाध आस्था नहुनुपर्ने हो तर तिनले परम्परालाई भत्काउन नसक्दा यस्तो हुँदो रहेछ कि क्या हो ? (करिब ४० वर्षका शर्माजी आइपुग्छन् । अभिवादन गर्छन् र बोल्न थाल्छन् ।)
शर्माजी – (अलि व्यङ्ग्यात्मक पाराले) के हो चिन्तनराजजी । आज अलि बढ्ता तनावमा देखिनुहुन्छ नि ! के भो त्यस्तो ? सुनाउन मिल्छ ?
चिन्तनराज – (फिस्स हाँस्दै) सुनाउन मिल्छ रे ! मान्छेहरूले यहाँ केके त गरिसके, तपाईं सुनाउने कुरा गर्नुहुन्छ ?
शर्माजी – (हाँस्दै) कसले के ग¥यो हँ ? आज तपाईंं अनौठो कुरा गरिरहनुभएको छ । कुरा अलि गम्भीर नै छ जस्तो छ नि ।
चिन्तनराज – (गम्भीर मुद्रामा) हो शर्माजी, कुरा अलि गहिरै छ । माक्र्स, एङ्गेल्स, लेनिन, माओका अनुयायी यहाँका माक्र्सवादीहरूले सरकार प्राप्त गरेपछि जनतालाई चटक्कै भुलेर कथित भगवान्को शरणमा जाने गरेकोले म निकै भावुक भएको छु । त्यसमाथि पनि राज्यकोषबाट धार्मिक अनुष्ठान गर्नु त सैद्धान्तिक विचलन मात्र होइन, अख्तियार दुरुपयोग पनि हो ।
शर्माजी – (सहमतिको भावमा) एकदमै ठिक कुरा गर्नु भो चिन्तनराजजी । साम्राज्यवादी मुलुक अमेरिकाको जर्जिया जस्तो परम्परावादी राज्यको विद्यालयमा समेत बाइबलको उक्ति टाँस्न पाइँदैन । धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा एउटा अमुक धर्म प्रवद्र्धन गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन । जस्तो कि मैले जर्जियाको उदाहरण दिएँ ।
चिन्तनराज – (सहमतिकै भावमा) ठिक हो । बुर्जुवाहरूले समेतले नगर्ने काम यहाँका प्रगतिशील विचार बोकेकाहरूले गरिरहेका छन् । बुर्जुवाहरूले समेतले सरकारी निवासमा धार्मिक अनुष्ठान गर्न हुँदैन ।
शर्माजी – (विषयान्तरण गर्न खोज्दै) चिन्तनराजजी हाम्रो समाज धर्मभीरुहरूको समाज हो । यसले हामीलाई निकै पछाडि पारेको छ । तीज लगायतका चाडपर्वमा नेपाली महिलाहरूले पहिरिने गरगहना कपडाले म त छक्क पर्छु । मलाई त के लाग्छ भने तिनीहरूले वैध–अवैध, नैतिक–अनैतिक, जुनसुकै उपायहरूबाट आपूm वा आफ्ना श्रीमानले आर्जन गरेको धन सम्पत्तिको रक्षा गर्ने नाममा तिनीहरूले त्यसो गरिरहेका छन् ।
चिन्तनराज – (हौसिँदै) ओहो ! शर्माजी, तपाईंंले बडो राम्रो कुरा गर्नु भो । यही चरित्र त हाम्रा कम्युनिस्ट नेताहरूमा देखापरिरहेको छ । दुःखको बेलामा यिनीहरू खाँटी सिद्धान्तवादी देखिन्छन् तर एक चरणको सफलताको समयावधिपश्चात् यिनीहरूको आदर्श खिइन्छ । जुनसुकै राजनीतिक दर्शन अँगालेको भए पनि उनीहरू एकपल्ट सत्ताको शिखरमा पुगेपछि ओर्लन चाहँदैनन् । हुन त यो मानवीय स्वभाव पनि होला ।
शर्माजी – (हाँस्दै) त्यै त । एक पटक माथि पुगेपछि त्यहाँ टिकिरहन खोज्दा उनीहरू विभिन्न उपायहरूको खोजी गर्छन् । एउटाले पूजा गर्दा बलियो भइन्छ भनिदिन्छ । अर्कोले औँठी लगाउँदा भाग्य ठूलो हुन्छ भनिदिन्छ । अन्ततः उनीहरू यस्तै यस्तैको पछि लाग्नाले विचलनको गम्भीर सिकार हुन पुग्छन् ।
चिन्तनराज – (अलिकति सोचे जस्तो गर्दै) हेर्नुस्, २०४७ पछिका नेताहरूले नाजायज रूपमा सम्पत्ति कमाएका छन् । त्यस्ता नेताहरू मानसिक रूपमा सदैव भयभीत भैरहेका हुन्छन् । उनीहरू सदैव त्रासपूर्ण मानसिकतामा हुन्छन् । उनीहरूमा साहस एक रत्ति पनि हुँदैन । त्यही बटुल्नका लागि उनीहरू धर्मको सहारा लिन पुग्छन् ।
शर्माजी – (गम्भीर हुँदै) ठिक भन्नु भो चिन्तनराजजी । वास्तवमा ऐतिहासिक भौतिकवादले मानिसलाई समाजको निर्माता मान्छ । यसको विकास वा विनास मानिसद्वारा नै हुन्छ । त्यसैले यी शाश्वत् कुराहरूलाई व्यवहारमै उपेक्षा गर्दै मानिसको भूमिकालाई नगन्य ठानेर अदृश्य शक्तिलाई सर्वेसर्वा ठान्ने मानिस कहिल्यै माक्र्सवादी हुनै सक्तैन । कुनै पनि वहानामा पुजापाठमा सरिक हुनेहरूलाई आपूm कम्युनिस्ट हँ भन्ने अधिकारै हुँदैन, होइन त चिन्तनराजजी ।
चिन्तनराज – (आक्रोशित मुद्रामा) हो शर्माजी ठिक हो । नेपालका कम्युनिस्टहरूमा धेरै पहिलेदेखि खोट छ । माक्र्सले संसारका सबै विषयहरूलाई आलोचनात्मक रूपमा हेर भनेका छन् । मिथकका भगवानका तस्बिरहरूमा ठाउँमा कम्युनिस्ट नेताहरूका तस्बिर लस्करै राखेर पुजा र धूपबत्ती गर्ने नेपालीहरू उहिल्यैदेखि धर्मभीरु थिए, जसले गर्दा तिनका शब्द र कर्मका बीचमा निकै ठूलो भिन्नता देखा परेको हो । भगवानले भलो भलो गरून् भन्ने तिनका चिन्तन र सोच नै गलत छ ।
शर्माजी – (उठ्दै) पुजा पाठमा सरिक हुनु भूमिगतकालमा कम्युनिस्टहरूका लागि लज्जाको विषय हुन्थ्यो । पार्टी मूल्याङ्कनमा उसको अङ्क काटिन्थ्यो । यस्ता विरासत बोकेका पार्टी र तिनका नेताहरू यस विषयमा अहिले भृकुटी खुम्च्याउन किन जरुरी ठान्दैनन् ।
चिन्तनराज – (उठ्दै) हो शर्माजी । माक्र्सले धर्मलाई अफिम भनेका छन् । नेपालका माक्र्सवादीहरू सैद्धान्तिक रूपमा यसलाई स्वीकार्छन् । उनीहरू पुजापाठलाई रुढिवाद ठान्दछन् तर व्यवहारमा उनीहरू यसैको पछि लागेका देखिन्छन् । वास्तवमा पुजापाठले सामन्तवादवादको पृष्ठपोषण गर्दछ । यसले समाजलाई अझ पछि धकेल्छ र धकेलिरहेको पनि छ ।
शर्माजी – (यताउति घुमेर हेर्दै) हैन चिन्तनराजजी, माक्र्स, लेनिन, माओका ब्रह्मवाक्यको आडमा मात्र बोल्ने नेपालका कम्युनिस्टहरू किन क्रमशः धर्मभीरु हुँदै गएका हुन् ? उनीहरूले ज्योतिषि, गुभाजु, झाँक्री धाएर साइत र जोखना हेराउँछन् । भाकल पूरा गराउन तीर्थस्थल पनि धाइरहेकै छन् तर पनि उनीहरू आपूmलाई नास्तिक नै भन्न रुचाउँछन् । उनीहरू आपूmलाई कुनै पनि हालतमा आस्तिक मान्न तयार हुँदैनन् र भएका पनि छैनन् । कस्तो विडम्बना !
चिन्तनराज – (यताउति गर्दै) यो उनीहरूको दोहोरो चारित्रिक पाखण्ड हो । हातका आँैलाभरि सजिएका विभिन्न धातु, पत्थर, मुगा, रत्न र मोती जडित औँठीहरू कम्युनिस्ट नेताहरूको रुढीग्रस्त मानसिकताको पोल खोलिरहेका छन् । कतिपयले दाम्लो जत्रो सिक्री पनि भिरिरहकै छन् । छ्या कुरा गर्न पनि घीन लाग्छ ।
शर्माजी – (बस्दै) धर्ममा आस्था राख्न सबै स्वतन्त्र छन् तर आपूmलाई द्वन्द्वात्मक भौतिकवादीका रूपमा चिनाउन रुचाउनेहरूको यो हविगत ! कठै ! यो पाखण्डको पराकाष्ठा हो नि चिन्तनराजजी । यसले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो सैद्धान्तिक धरातल छाड्दै क्रमशः धार्मिक पार्टीमा परिणत गम्भीर खतरा देख्छु म त । कुरा एउटा काम चाहिँ अर्कै वाह !
चिन्तनराज – (बस्दै) यस्ता सैद्धान्तिक विचलन नेपालका धेरै कम्युनिस्ट नेताहरूमा देखा परिरहेको छ । गुप्त रूपमा कैयौँ नेताहरू घन्टौँघन्टा पुजापाठमा लीन हुनेहरू गरेका छन् । जनतामा विश्वास नगरेर सरकारको म्याद बढाउन एक कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले सपरिवार हनुमानढोका पुगेर तलेजु भवानीको आराधना गरे । कठै तिनको हविगत ! मलाई त के कुराको डर लागिरहेको छ भने यो महारोग क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूमा पनि भुसको आगो झैँ सल्किँदै पो छ कि ?
शर्माजी – (गिलासमा रहेको पानी पिउँदै) माक्र्सवादीहरू कुनै दैवी शक्तिमा सैद्धान्तिक रूपमा विश्वास नगर्दा नगर्दै पनि संसदीय प्रणालीलाई आत्मसात् गर्न पुग्दा उनीहरूमा यस किसिमको विचलन आएको हो । भोटको राजनीतिले उनीहरूलाई धर्मप्रति उदार मात्र बनाएन, स्खलनको डरलाग्दो गर्तमा समेत हालिदियो । लेनिनले संसदीय प्रणालीलाई खसीको टाउको झुन्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलोको रूपमा यसै परिभाषित गरेका होइनन् । राजनीतिक प्रणाली तथा धर्मप्रति पार्टी र नेताहरूको विचार एवम् जनताका विचार र विकासमा उचित संयोजन नहुँदासम्म पनि यी समस्याहरू देखिएका छन् । यसको मुख्य समस्या विचारधारात्मक समस्या नै हो । कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले जनताका बीचमा कर्मले मात्र भाग्य कोर्न सकिन्छ भन्ने सत्य बोल्ने साहस पनि हत्तपत्त गर्न सक्तैनन् किनभने जनता रिसाए भने भोट घट्छ ।
चिन्तनराज – (पानी पिउँदै) कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा राजनीतिक, वैचारिक, दार्शनिक विषयमा निरन्तर प्रशिक्षणको अभावले पनि यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो । उनीहरूले सिद्धान्तलाई जीवन व्यवहारमा लागु गर्ने प्रयास पनि कम गरेका छन् । अहिले नेताहरू अध्ययन गर्दैनन् । लेख्न पनि छोडिसके । कतिपयले त सिद्धान्त पनि बिर्सिसके कि (हाँस्दै) । सायद तिनले माक्र्स, लेनिनका तस्बिर पनि बिर्सिसके कि …।
शर्माजी – (हाँस्दै) पुजापाठले सत्ता, शक्ति र सफलता प्राप्त हुने भएको भए नेपालमा यही लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि प्राप्त हुँदैनथ्यो । तत्कालीन राजा ज्ञोनेन्द्रले सत्ता टिकाउन के मात्र गरेनन् । उनले नेपाल र भारतमा प्रायः सबैजसो प्रख्यात भनिएका मन्दिरहरूमा पुजापाठ गरे । उनले त्यसबखत चरु मात्र होइन, खुर्सानीको होम समेत गरे तर जनता उर्लेपछि ज्ञानेन्द्रको केही लागेन । दाजुको बंश सिध्याउने काम पनि उनको लागि धेरै महङ्गो सावित भयो । महान् जनयुद्धले संसदीय दलहरू त के ज्ञानेन्द्रको समेत केही जोर चलेन ।
चिन्तनराज – (हाँस्दै) रीतिरिवाजलाई प्रस्थान विन्दु बनाएर कम्युनिस्टहरू पुजापाठी हुनु भनेको जनताको अनादर गर्नु हो । दियो कलस थापेर कुसनमा पलेंटी कसेर सपरिवार बस्नुलाई माक्र्सवादले स्वीकार्दैन । विज्ञान र अध्यात्मवाद फरक कुरा हुन् । बुर्जुवाहरू अध्यात्मवाद मान्छन् । साम्यवादीहरू विज्ञान मान्छन् । कम्युनिस्ट नेताको उमेर र उसको राजनीतिक दर्शनको बीच उचित तालमेल नमिल्दा तिनीहरूमा विचलन आएको हो कि ! एक क्रान्तिकारीले समेत नायिकाको हातबाट तिहारमा परम्परावादी तरिकाले टीका लगाउनुको अर्थ के हो ? द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा विश्वास गर्ने ती क्रान्तिकारी कुम्युनिस्टको दीर्घायु, सुस्वास्थ्य र प्रगतिको कामना गर्दै ती नायिकाले तेल, मखमली, सप्तरङ्गी टीका मात्र लगाइनन्, कानमा ओखर समेत बजाइदिइन् । कत्रो अनर्थ ? एक ठुलै नेता त झन् धार्मिक अनुष्ठानमा विराजमान हुन पुगे ।
चिन्तनराज – (गम्भीर हुँदै) ओहो ! चिन्तनराजजी, हाम्रो बहस गम्भीर पो भयो त । तपाईंंले जुन कुरा उठाउनुभयो, यो निकै गम्भीर कुरा हो । क्रान्ति पुरा भएका देशहरूमा त परम्पराका कैयन कुराहरूले निकै पछिसम्म दुःख दिइरहको हामी पाउँछौँ । त्यसको समयमै उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा अन्ततः ती देशहरूमा प्रतिक्रान्ति भए । चीनमा माओले सांस्कृतिक क्रान्ति यसै गरेका थिएनन् । त्यहाँ माओको निधनसँगै त्यहाँ पनि प्रतिक्रान्ति भयो । नेपालमा त जनवादी क्रान्ति पुरा भएकै छैन । हो, एउटा कुरा चाहिँ अवश्य हो, एक दसकको महान् जनयुद्धले परम्परागत नेपाली समाजको जगलाई नराम्ररी हल्लाइदिएकै हो । यो सच्चाइलाई कतिपय स्वार्थी मानिसहरूले भित्रैदेखि आत्मासातीकरण गर्न सकिरहेका छैनन् । यो दुःखको कुरा हो । यो इतिहासप्रतिको ठूलो गद्दारी पनि हो ।
चिन्तनराज – (गम्भीर भावमा) ओहो, यो मुलुकमा जनयुद्धले निकै ठूलो उथलपुथल पो ल्याएको हो त । हिजो क्रान्तिकारीहरूको आफ्नै जनसत्ता थियो । फेरि सत्ता
भनेको यस्तो चीज हो जसले सुकर्म र कुकर्म दुवैको अवसर दिन्छ । कतिपय सत्तामा पुगेपछि हौसिएर विचलित पनि भएका छन् । यसमा सत्ता उन्मादको पनि महत्वपूर्ण स्थान छ । एक कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले आफ्नी पत्नीलाई लम्पसार परेर खुट्टा ढोगाएकै हुन् । यसले नारी मुक्तिको भाषण गर्ने कम्युनिस्ट नेताको ढाेंगी र ठालुपनको चरित्रलाई राम्रैसित प्रस्ट गरिदिएको छ, यो उनको दार्शनिक विश्वासको कमजोर जग हुनु हो ।
शर्माजी – (मर्मका साथ) कलिलो उमेरमा क्रान्तिकारी विचार र समतामूलक समाजको सपना देखेर आन्दोलनमा लागेकाहरू तर विचार र सिद्धान्तलाई नबुझ्नेहरू कम्युनिस्ट पार्टीको नेता भएका छन् । जो आफौ भ्रममा छ भने यसले कसरी नेतृत् वगर्न सक्छ ? दार्शनिक आधार नै नबनाइकन कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेकाहरू अन्ततः परिपक्व कम्युनिस्ट बन्न सक्दैनन् । कुनै मुद्दाले आकर्षित गरेर लहैलहैमा लागेर कम्युनिस्ट बन्नेहरूमा चाहिँ अलि बढी सैद्धान्तिक विचलन आउने गरेको छ । सत्र वर्ष जेलमा बसेका नेपालका नेल्सन मन्डेला भनेर चिनिएका एक नेताले अन्तिममा गेरुवस्त्र धारण गरे । यसले नेताहरूमा विश्वास धर्माएको स्पष्ट देखाएको छ ।
चिन्तनराज – (व्याख्याको भावमा) धर्मबारे विभिन्न विचारकहरूले आ–आफ्ना धारणाहरू व्यक्त गरेका छन् । कतिले यसलाई वस्तुको भाव र लोकमान्यताका आधारमा ग्रहण गर्ने कुरा बताएका छन् भने कतिले यसलाई कर्मको उत्प्रेरणा वा विधिविधानका रूपमा लिने बताएका छन् भने कतिले चाहिँ लोकको उत्पत्ति र कल्याणको रूपमा यसको व्याख्या गरेका छन् ।
शर्माजी – (उस्तैगरी) ठिक हो । महाभारतले धर्मलाई धारणा भनेको छ भने लोकले जे धारण गर्छ, त्यो धर्म हो भन्ने कुरा चाणक्य नीति बताउँछ । राहुल साङ्कृत्यायनले कुनै अलौकिक शक्तिमा विश्वास गर्नु नै धर्मको सार हो भने । धार्मिक रूपमा नेपाललाई तेत्तिस कोटि देवताको थलोको रूपमा चर्चा गरिँदै आएको छ । त्यसैले पनि यो भूखण्डमा धर्मभीरुहरूको जडता एकदमै डरलाग्दो हुने नै भयो । भारतीय उपमहाद्वीपले यसको ठूलो पीडा सहनुपरिहेको यथार्थ कसैको सामु छिपेको छ र ? कार्ल माक्र्सले धर्मलाई उत्पीडित प्राणीको सुस्केराको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । इतिहासका कैयौँ बेलामा धार्मिक आन्दोलनले प्रगतिशील भूमिका नखेको पनि होइन । इसा मसिहलाई दिइएको फासीको सामाजिक रूपान्तरणमा ठूलो स्थान रहेको मानिन्छ । राज्यले धर्मलाई व्यक्तिगत मामिलाको रूपमा व्याख्या गरे पनि वास्तवमा धर्म कुनै पनि राज्य तथा पार्टी सापेक्ष हुनै सक्तैन ।
चिन्तनराज – (ठूलै स्वरमा) लेनिनले धर्मको विरोध गर्नुपर्छ भनेका छन् । यो कुरा सम्पूर्ण भौतिकवादी र माक्र्सवादीहरूका कखरा हो । धर्मका सामाजिक जराहरूको उन्मूलन गर्न आवश्यक छ । यस्तो किसिमको सङ्घर्षलाई ठोस वर्ग तथा ठोस आन्दोलनसित जोड्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
शर्माजी – (ठूलै स्वरमा) धर्मका थुप्रै धाराहरू रहेको हामी देख्न सक्छौँ । प्रतिनिधि रूपमा दुइटाको उल्लेख गर्न सकिन्छ । पहिलो, अवसरवादी धारा हो । यसमा दक्षिणपन्थको राम्रो पहुँच हुने नै भयो । दोस्रो, क्रान्तिकारी धारा रहेको छ । यसले धर्मको दृढतापूर्व खण्डन र विरोध गर्ने गरेको छ तर यसको पनि प्रभावकारिता न्युन रहेको देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिका बीचमा प्रशासनिक आदेशद्वारा धर्मलाई उन्मूलन गर्न नसकिने कमरेड माओको भनाइ निकै मननीय छ ।
चिन्तनराज – (उठ्दै) माक्र्सवादी आवरणमा धार्मिक रुढीवादमा अल्झिएर समाजको अग्रगामी मार्गलाई अवरुद्ध बनाउने प्रवृत्तिको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ । माक्र्सवादीहरूको मूल मान्यता धार्मिक उत्पीडन र अन्धविश्वासको विरोध गर्नु हो । यसमा दीर्घकालीन वैचारिक सङ्घर्ष र रूपान्तरणको प्रक्रिया अपनाउनु आवश्यक छ । माक्र्सवादीहरू धर्मविरोधी हुन्छन् । धर्मको विरोधको कामलाई प्रभावकारी बनाउन प्रचार प्रसारको कमलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । धर्मको विरोध गर्ने प्रक्रियामा सबैखाले अवसरवादका विरुद्ध वैचारिक सङ्घर्ष चलाउँदै जान र धर्मको विरोधको कामलाई वर्ग सङ्घर्षसित जोड्न आवश्यक छ । धर्मको जन्म विशेष सामाजिक, ऐतिहासिक सन्दर्भमा भएको हुँदा यसको सन्दर्भ पनि सोही अनुरूप खोज्नु मनासिब हुन्छ । यो सबैको सबैले आपूmबाट सुरु गर्नुपर्छ । आफ्नो टाउकोमा आफैँले आगो लगाउने संस्कृतिको निर्माण नगरिकन हामीले सोचे जस्तो सैद्धान्तिक, राजनीति, दार्शनिक, सांस्कृतिक मूल्य स्थापित गर्न सक्तैनौँ । हाम्रा कोही अलौकिक, अदृश्य शक्ति छैनन् । हाम्रा सर्वस्व भनेका जनता नै हुन् । जनता नै हाम्रा भगवान हुन् । (शर्माजी पनि उठ्छन् । दुवै भित्तातर्फ रहेका कम्युनिस्ट दार्शनिक गुरुहरूलाई हेर्छन् । दुवै अगाडि फर्कन्छन् र जोसिलो अभिवादन गर्दछन् ।)
चैत, २०६७ ।